हास्य कसरी बनाउने | क्रिएटिभ अनलाइन
कमिक कसरी बनाउने
एनकर्नी आर्कोया | | मा अद्यावधिक गरियो 04/01/2022 11:12 | डिजाइन उपकरणहरू
यदि तपाईंलाई मंगा र कमिक्स मनपर्छ भने, पक्कै पनि कुनै अवसरमा तपाईंले आफ्नो सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सोचाइ समाप्त गर्नुभयो। तर, हास्य कसरी बनाउने? यो सुनाउन जति सजिलो छ?
यस अवसरमा, हामी तपाईंलाई कमिक बनाउनको लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू के हो तर तपाईंले प्रयोग गर्न चाहनुहुने उपकरणहरू, चाहे तपाईंले हातले गर्नुहुन्छ वा यसलाई सिर्जना गर्न केही प्रोग्रामिङ वा इन्टरनेट अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जान्न मद्दत गर्न चाहन्छौं। त्यसो गरौं?
1 हास्य के हो
2 हास्य सिर्जना गर्न चरणहरू के हुन्
2.1 एक विचार छ
2.2 विचारको विकास गर्नुहोस्
2.3 कोर्न को लागी समय
3 तपाइँलाई हास्य बनाउन के उपकरण चाहिन्छ?
4 हास्य बनाउन अनलाइन कार्यक्रमहरू र अनुप्रयोगहरू
4.6 स्टोरीबोर्ड त्यो
4.9 BDnF, निर्माण à BD
हास्य के हो
RAE को अनुसार, कमिकलाई "कथा बताउने भिग्नेटहरूको श्रृंखला वा अनुक्रम" को रूपमा परिभाषित गरिएको छ। अर्को शब्दमा, हामी भन्न सक्छौं कि यो पृष्ठहरूको एक श्रृंखला हो जसमा, भिग्नेटहरू, संवादहरू र अभिव्यक्तिहरू मार्फत, ग्राफिक कथा भनिन्छ, किनकि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रचलित दृश्य शैली हो।
हास्य सिर्जना गर्न चरणहरू के हुन्
अब तपाईलाई कमिक भनेको के हो भन्ने थाहा छ, यो व्यवसायमा जाने समय हो। र, यसको लागि, त्यहाँ चरणहरूको एक श्रृंखला हो जुन तपाईंले खातामा लिनु पर्छ। यी हुन्:
एक विचार छ
मेरो अर्थ, तपाईंलाई कमिक वा कमिक स्ट्रिप बारे जान्न आवश्यक छ। तपाईले के बनाउन चाहानुहुन्छ लगभग मिलिमिटरमा सोच्नु पर्छ। यसको मतलब यो होइन कि पछि तपाइँ लाइनबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्न, यसको विपरित, तपाइँले गर्नु पर्ने कुरा त्यो कमिकको विचारलाई पछि विकास गर्न (स्क्रिप्ट, संवाद, दृश्यहरू, आदि) लेख्नु पर्छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, यसले तपाईंलाई धेरै समय र टाउको दुखाइ बचाउनेछ।
विचारको विकास गर्नुहोस्
यो हामीले तपाईलाई पहिले नै भनिसकेका छौं। थाहा पाउनुपर्छ तपाइँ यसलाई कुन विधामा फ्रेम गर्नुहुन्छ, पात्रहरूको उद्देश्य के हो, कथा कहाँ हुन गइरहेको छ ...
तपाईं यो चाल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: एउटा कमिक सिर्जना गर्नुहोस् जसमा शुरुवात, मध्य (अर्थात, समस्या) र अन्त्य हुन्छ (त्यो समस्याको समाधान)। यस तरिकाले, तपाईंले तर्कलाई बल दिनुहुनेछ, यद्यपि तपाईं यसलाई लामो समयसम्म चाहानुहुन्छ।
रेखाचित्रको प्रकार विकास गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ तपाईं के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, यदि यो अधिक कार्टुन शैली, मङ्गा, मार्वल शैली ... सबै हो कि तपाइँ एक प्रकारको भिग्नेट सिर्जना गर्नुहुन्छ वा अन्यमा प्रभाव पार्छ। यसलाई योजना भनिन्छ र यसलाई दिमागमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाइँ हातले वा अनलाइन उपकरणहरूसँग कमिक बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि।
कोर्न को लागी समय
सोच्न को लागी थोरै बाँकी छ, यो समय हो तिमीलाई कोर्न को लागी। त्यहाँ क्यारेक्टरहरू, परिदृश्यहरू, विशेष प्रभावहरू, आदिका लागि केही प्रविधिहरू छन्। यदि तपाइँ तिनीहरूलाई कसरी लागू गर्ने भनेर जान्नुहुन्छ भने, तिनीहरूसँग अगाडि बढ्नुहोस्। यदि होइन भने, हुनसक्छ तपाईंले थोरै तालिम दिनुपर्छ र सुरुमा अनलाइन उपकरणहरूको लागि जानुपर्छ।
तपाइँलाई हास्य बनाउन के उपकरण चाहिन्छ?
यदि तपाइँसँग रेखाचित्रमा केही तालिम छ, वा तपाइँ यसमा राम्रो हुनुहुन्छ भने, तपाइँ म्यानुअल रूपमा कमिक बनाउन सक्नुहुन्छ र स्क्र्याचबाट सबै कुरा आफैं सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्नको लागि, तपाईंलाई आवश्यक उपकरणहरूको श्रृंखला चाहिन्छ। कुन हो? निम्न:
चित्र को लागी पेन्सिल। तिनीहरू विशेष पेन्सिलहरू हुन् र तपाईंसँग राम्रो बिन्दु, कडा बिन्दु, आदि हुनुपर्छ। जुन विभिन्न स्ट्रोक बनाउन प्रयोग गरिनेछ।
रंगीन पेन्सिल। यदि तपाइँ तपाइँको कमिकमा रंग दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने। तिनीहरू सामान्य छैनन् किनकि सामान्यतया यी कालो र सेतोमा हुन्छन्। सबैभन्दा प्रमुख ब्रान्डहरू Faber Castell, Aquamonolith Cretacolor वा Caran d'Ache हुन्।
चारकोल। तिनीहरू स्केच बनाउन पहिलो उपकरण हुन्। तपाईंसँग चारकोल पेन्सिलहरू पनि उपलब्ध छन् जसले समान प्रभाव पार्छ।
कपिक मार्करहरू। धेरैले यसलाई प्रयोग गर्नका लागि, एकपटक पेन्सिलको डिजाइनलाई रूपरेखा गरिसकेपछि, मार्करहरूका साथ सबै कुरामा जानुहोस् ताकि केहि पनि नमेटियोस्।
हास्य बनाउन अनलाइन कार्यक्रमहरू र अनुप्रयोगहरू
अन्तमा, र हामीलाई थाहा छ कि कमिक बनाउन तपाईंले सुरुमा सोचेको जस्तो सजिलो नहुन सक्छ, यी अनलाइन उपकरणहरू काममा आउन सक्छन् किनभने तिनीहरूले तपाईंले गर्नुपर्ने कामको अंशलाई सरल बनाउँछन्। विशेष गरी, हामी निम्न सिफारिस गर्दछौं।
यो तपाईंले प्रयोग गर्न सक्ने पहिलो अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो। निस्सन्देह, तपाईंले यो दिमागमा राख्नु पर्छ तपाईं Flickr बाट फोटोहरू प्रयोग गरेर हास्य बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ। यो गर्नको लागि, तपाईंले आफ्नो फ्लिकर खातामा लग इन गर्न सक्षम हुनको लागि।
एपले तपाईंलाई फोटोहरूमा स्पीच बबलहरू राख्न अनुमति दिन्छ ताकि तपाईं कथा भन्न सक्नुहुन्छ।
Pixton एक नि: शुल्क उपकरण होइन, तर योसँग नि: शुल्क संस्करण छ, यदि तपाइँ कमिक्स बनाउन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने, काममा आउन सक्छ। सामान्यतया यो एक खेल जस्तै हो किनभने हरेक दिन 10 सिर्जनाहरू छनोट गरिन्छ र, तिनीहरूसँग, तपाइँ एक हास्य सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ.
यो पृष्ठले तपाईंलाई अनुमति दिनेछ कमिक्स बनाउनुहोस् तर तपाईंसँग भएका पूर्वनिर्धारित छविहरूसँग पुस्तकहरू पनि चित्रण गर्नुहोस्।
त्यहाँ एक राम्रो आधार छ र सबै भन्दा राम्रो, तपाईं ती रेखाचित्रहरू पनि अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ।
होइन, तपाईं गलत ट्र्याकमा हुनुहुन्न। मार्वल "मार्वल" हो, यो कमिक्स र संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध प्रकाशक हो कमिक बनाउन आफ्नै प्लेटफर्म सिर्जना गर्नुभयो, त्यसैले तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र, कसलाई थाहा छ, हुनसक्छ र उनीहरूले तपाइँ के कोर्नु हुन्छ र सँगै केहि गर्न प्रस्ताव गर्नुहुन्छ।
यो कमिक्सको सबैभन्दा नजिकको कारण हो तपाईंलाई क्यारेक्टरहरू, सेटिङहरू, वस्तुहरू, संवादहरू, आदि दिन्छ। यस्तो तरिकाले कि तपाइँ तपाइँको दिमागमा रहेको विचार अनुसार तिनीहरूलाई संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो के प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ हामी तपाइँलाई हास्य बनाउन अर्को कार्यक्रम छोड्छौं। यो एकदम उल्लेखनीय छ किनभने, यद्यपि नि: शुल्क र प्रिमियम संस्करण छ (जहाँ तपाइँ थप स्रोतहरू र कार्यक्षमताहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ), यो हास्य जस्तै देखिन्छ।
पहिलो-टाइमरहरूका लागि यो राम्रोसँग जान सक्छ, विशेष गरी तिनीहरूका लागि जसलाई रेखाचित्रको धेरै जानकारी छैन (यो आयामहरू हेर्ने तरिका हो, परिदृश्यहरू कसरी काम गर्ने, आदि)।
यस अवस्थामा, हामीलाई Creately को बारेमा सबैभन्दा मनपर्ने कुरा यो हो कि यसमाaछ धेरै टेम्प्लेटहरू जसले तपाईंलाई प्रभावशाली दृश्यहरू आफैले सिर्जना नगरीकन गर्न अनुमति दिन्छ। एकचोटि तपाईंले यसलाई प्रिन्ट गरेपछि, तपाईं आफ्नो कल्पनालाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ र दृश्यहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ जुन बाँच्न गइरहेको छ।
तपाईंसँग लगभग सबै कुरा छ, कमिक स्ट्रिपहरू, स्क्रिप्टहरू, साहसिक कार्य वा लडाईका दृश्यहरूका लागि टेम्प्लेटहरू, इत्यादि।
क्यानभा त्यो क्षेत्रमा पेशेवर होइन तर व्यावसायिक स्रोतहरू सिर्जना गर्न चाहनेहरूका लागि डिजाइन उपकरण भएको छ। यद्यपि यो "मंगा" पक्ष राम्रोसँग थाहा छैन, सत्य यो हो तपाइँसँग नि: शुल्क टेम्प्लेटहरू छन् र तपाइँले तपाइँको आफ्नै हास्य अनलाइन सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
BDnF, निर्माण à BD
यो अनौठो नाम फ्रान्सको राष्ट्रिय पुस्तकालयले बनाएको एप्लिकेसनसँग मेल खान्छ। उनको लक्ष्य युवा मानिसहरूलाई एउटा उपकरण ल्याउनु थियो ताकि तिनीहरूले आफ्नो रचनात्मकता खोल्न र कमिक्स र ग्राफिक उपन्यासहरू सिर्जना गर्न सकून्।
तपाईंसँग यो अंग्रेजी र फ्रान्सेलीमा मात्र छ, तर यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ। अब, उहाँका दृष्टान्तहरू धेरै छैनन् र यसले तिनीहरूको प्रयोगलाई थोरै सीमित गर्दछ, तर सुरुको लागि यो एकदम उपयोगी हुन सक्छ।
तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा, हास्य बनाउन धेरै सजिलो छ त्यसैले तपाईले केवल विचार सोच्नु पर्छ, यसलाई आफ्नो दिमागमा विकास गर्नुहोस् र केहि उपकरणहरूको साथ यसलाई सत्य बनाउनुहोस्। कसलाई थाहा छ, सायद तपाईं प्रसिद्ध हुनुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » कमिक कसरी बनाउने
Prestasahop मा SEO कसरी अप्टिमाइज गर्ने
WhatsApp को लागी स्टिकर कसरी बनाउने